Maxkamadda Nugaal oo dhageysi labaad gelineysa Kiiska Haweeney xamilo ah inta la kufsaday lana dilay - Awdinle Online
Maxkamadda Nugaal oo dhageysi labaad gelineysa Kiiska Haweeney xamilo ah inta la kufsaday lana dilay
February 22, 2020 (Awdinle Online) –Maxkamadda Darajada 1-aad ee Gobolka Nugaal ayaa maanta dhageysi labaad gellineysa Kiis dacweedka ka dhashay Kufsiga iyo dilkii xigay ee loo geystay Hodan Axmed Shanleyste oo ahayd Haweeney Xaamilo ah.
Kiiska Hodan waxa uu ka dhacay Magaalada Garoowe 11-kii April sanadkii hore 2019-kii, waxaana loosoo qabtay 7-ruux oo lagu tuhmayo Kufsiga iyo dilka xigay in ay geysteen, kuna weerareen Gurigeeda xilli uu ka maqnaa Seygeeda oo la sheegay in uu beeraley yahay.
Dhageysiga 1-aad ee Dacwadda ragga xiran waxa uu dhacay 15-kii Bishaan oo ku beegneed Sabtidii Todobaadkii tagay, Guddoonka Maxkamadda ayaa muddeeyay maanta oo ay taariikhdu tahay 22-ka Febaarayo 2020.
Hodan waa Hooyo ifka kaga tagtay labo Carruur ah oo kala ah Wiil iyo Gabar, tan iyo markii uu dhacay falkaan waxaa socday baaris lagu sameynayo Shaqsiyaadka loosoo qabtay in ay kufsiga iyo dilka isugu dareen Haweeneyda Xaamilada ah.
Maxkamadda Darajada 1-aad ee Puntland waxa ay maalmihii dambe qaadeysay Kiisaska la xiriira Dhibaatooyinka ka dhanka ah Haweenka sida Kufsiga iyo Dilka, waxaana bishaan Febaarayo Maxkamadda ay fulisay dilka labo kamid ah Raggii Kufsaday kadibna dilay Caasho Ilyaas Aadan, Nin Gabar da’yar kufsaday oo lagu riday 5-sano oo xabsi ah, $1000 oo ganaax ah iyo meherka Gabadha.
Previous articleMuqdisho oo wili ka socda aruurinta Xoolaha .
Next articleFarmaajo oo Feysal C/Waraabe weydiistay inuu u fududeeyo tegistiisa Hargeysa